चीनको पनि नेपालमाथि नाकाबन्दी हो ? « मेचीखबर
चीनको पनि नेपालमाथि नाकाबन्दी हो ?
२२ पुष २०७२, बुधबार ०९:४७ मेचीखबर
काठमाण्डौ । नेपालमा १२ वैशाखमा विनाशकारी भूकम्प आयो । भूकम्पबाट गोरखासहितका वाग्मती अञ्चलमा जिल्लाहरुमा सिन्धुपाल्चोक सबैभन्दा बढी प्रभावित हुन पुग्यो । नेपालको उत्तरी छिमेकी चीनसँग व्यापारको लागि सिन्धुपाल्चोककै तातोपानी नाका भूकम्पले क्षति पुर्याएपछि बन्द हुन पुग्यो । तर, भूकम्प गएको ८ महिना बितिसक्दा पनि चीनसँगको प्रमुख र महत्वपूर्ण तातोपानी नाका अझै खुल्न सकेको छैन । नेपालले यो नाकालाई प्राथमिकतामा राखेको छ तर, चीनको प्राथमिकता तातोपानी नभई रसुवागढी नाकातर्फ रहेको देखिन्छ । भूकम्पबाट प्रभावित भएको भन्दै यो नाका खुल्न चार पाँच महिना लाग्ने चीनले बताउँदै आएको छ ।
भूकम्पले पीडित नेपालीलाई भारतले नाकाबन्दी गरेर दैनिक जीवन नै अस्तव्यस्त पारिदियो । इन्धन, औषधी, खाद्यान्नको अभावले जनजीवन असाध्यै कष्टकर बन्न पुगे पनि भारतले ७० प्रतिशत सामान आयात हुने रक्सौल नाकालाई पूर्ण ठप्प बनाउँदै आएको छ । यो क्रम झण्डै चार महिना पुग्न लागेको छ । तर, अझै खुल्ने छाँट देखिंदैन ।
यसको विकल्पमा नेपालले इन्धन, खाद्यान्नसहितका अत्यावश्यक सामग्री ल्याउन उत्तरी छिमेकी चीनतर्फ आँखा पुर्याएको छ तर, चीनसँग द्रुततर रुपमा यस्ता सामग्री ल्याउने गरी सहमति र सम्झौता अघि बढ्न सकेका छैनन् । नेपालमा मानवीयताको संकट गहिरिएपछि चीनले अनुदानको रुपमा १० लाख लिटर पेट्रोल रसुवागढी नाकाबाटै दिओ । फेरि पनि अनुदानमा पेट्रोल दिने घोषणा चीनले गरेको छ । तर, यो पनि रसुवागढीबाटै दिने उसको योजना छ ।
तर, तातोपानीलाई पहिले जस्तै पूर्ण रुपमा पहिलो प्राथमिकतामा राखेर चीनले यसलाई सुचारु गर्न चाहिरहेको छैन । किनकी नेपालको भरपर्दो प्रतिवद्धता आए चीन केरुङतिरको रसुवागढी नाकालाई नै प्रमुख नाका बनाएर नेपाललाई सबै खालका सहयोग गर्न तयार छ । तर, गढीतर्फको बाटो कच्चा भएकोले पक्की बाटौ भएको तातोपानी नाका नेपालको प्राथमिकतामा छ । तत्काललाई वीरगंज जत्तिकै महत्वको नाका तातोपानी हो । तर, भारतले नाकाबन्दी लगाएको बेला तातोपानी पनि भूकम्पको कारण बाटो खुलेर पनि बन्द छ ।
भारतले यसैलाई निहुँ बनाएर चीन पनि नेपालमाथि नाकाबन्दी गरेको कुटनीतिक रुपमा सन्देश प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पुर्याएको संचारमाध्यमहरुले जनाएका छन् । तर, के चीनले तातोपानी नाका नखुलाएर नेपालमाथि नाकाबन्दी गरेको हो त ? यसमा चीनको पनि स्वार्थ भने पक्कै देखिन्छ । तातोपानी नाकाबाट हुने सुन र रक्तचन्दन तस्करी, स्वतन्त्र तिब्बतको लागि क्रियाकलाप बढेकै कारण चीनले रसुवागढीलाई प्राथमिकता दिएको बुझ्न सकिन्छ । यस्तो उसको रणनीतिलाई नेपालमाथिको नाकाबन्दीभन्दा पनि उसको भूराजनीतिक संवेदनशीलतालाई नेपालले बुझिदिओस् भन्ने देखिन्छ ।
विश्व अर्थतन्त्र र शक्तिका रुपमा उदाउँदै गरेको चीन सबै छिमेकीसँग सौहाद्र्र सम्बन्ध चाहन्छ । विश्वलाई उसले यस्तै सन्देश दिन पनि चाहेको छ । सोही कारण सीमामा अवैध काम नहोस् भन्ने तर्फ उ सजग भएकै कारण नराम्रा गतिविधि हुने नाकालाई कम व्यस्त बनाई अन्यत्रका नाकालाई उसले प्राथमिकता राखेको पाइन्छ । यस्तोमा नेपाल सरकारले पनि उसको संवेदनशीलतालाई ख्याल गर्दै सहयोग गर्नुपर्छ । तर, रसुवागढी नाका निरन्तर र प्रभावकारी रुपमा नचल्दासम्म तातोपानी नाकालाई पनि सुचारु गर्नका लागि दबाब दिनुपर्छ । किनकी पक्की बाटोले जोडिएको र दुरीका हिसाबले पनि नजिक रहेको तातोपानी नाका नेपालको लागि सहज हुन्छ । भरपर्दो विश्वास दिलाएर नेपालले यो संकटमा तातोपानी नाकालाई सुचारु गर्न सकारात्मक दबाब दिनुपर्छ ।
चीन नेपालसँग दीर्घकालीन आर्थिक सम्बन्ध विस्तार, जलविद्युतमा लगानी, दीर्घकालीन रुपमा इन्धन व्यापार सम्झौता एकैपटक गर्न चाहन्छ । किनकी अहिले संकटमा मात्र इन्धनको कुरा गरेर पछि धोका दिने हो की भन्ने संशय चीनलाई परेको बताइन्छ । परराष्ट्रमन्त्री कमल थापा र चिनियाँ समकक्षीबीच केही दिन अघि भएको छलफलमा यस्तै विषयले प्राथमिकता पाएका थिए ।